Iindaba-Ukuxhathisa iBand ekhaya Workout
Ngexesha lomkhuhlane kunye ne-covid-19 spiking okwangoku, ii-gyms ezininzi ziyavala okwethutyana kwakhona. Olu qeqesho lunokwenziwa ekhaya kwaye lufuna kuphela ibhendi yokuchasana evulekileyo.
Ibhendi iza ngobubanzi obahlukeneyo. Ubungqindilili bubanzi kokukhona uxhathiso lunika kwaye kunzima ukusebenzisa. Unokufuna ukuthenga uluhlu lweebhendi ukuze uqhubeke njengoko usomelela.
Sebenzisa amabhendi kunokuziva ngathi kuyothusa xa uqala. Isitshixo kukuqinisekisa ukuba ulawula uxinzelelo kunye nesantya seentshukumo zakho ukuze ungazibopheli iibhendi ekupheleni kwempendulo nganye.
Zininzi izibonelelo zokubandakanya amaqela oxhathiso njengenxalenye yokujikeleza kwakho ukuzilolonga rhoqo. Banokukunceda wakhe amandla, ukuphucula ukuhamba kunye nokufumana izihlunu ezizinzileyo zokukunceda wakhe amandla omzimba kunye neqela lokuqala lemisipha elisebenzayo. Zikunika ikhefu kwimonotony yoomatshini bokuzilolonga kwaye njengenzuzo eyongezelelekileyo ayisindi kwaye iyaphatheka ukuze ubathathe xa useluhambeni.
Shushubeza 1 Imizuzu emi-5 ICardio
Bahleli imiqolo kunye neBhendi 4 12 Imizuzwana engama-30
Ukuphakamisa kamva kunye neBhendi 3 8 icala ngalinye Imizuzwana engama-30
Ukuxhathisa iBhendi yamaGxa 4 12 Imizuzwana engama-30
Ii-curls zeBicep kunye neBhendi 4 15 Imizuzwana engama-30
Imiqolo ethe tye neBhendi 3 12 Imizuzwana engama-30
Phola 1 Imizuzu emi-5 ICardio
Ukuhlala imiqolo ngeBand Resistance
Hlala phantsi ngemilenze ethe tye phambi kwakho.
Ukubamba izibambo zebhendi yokumelana, beka iziko lebhanti ujikeleze iinyawo zakho, emva koko usongele isiphelo ngasinye ngaphakathi kwaye ujikeleze unyawo ngalunye ixesha lokwenza umtya kunyawo ngalunye.
Hlala ubude ngaphandle kweethayithi kunye nokubamba izibambo phambi kwakho ngeengqiniba ezigobile ecaleni kwakho.
Tsala izibambo umva kude kube secaleni kwakho kwaye iingqiniba zisemva kwakho. Khulula kancinci.
Ukuphakamisa kamva kunye neBhendi
Yimani iinyawo kunye kunye ekupheleni kweluphu.
Bamba iziphelo zebhendi, yeka izibambo zixhome ngqo phantsi kunye neentende zakho zijongane.
Ukugcina i-torso yakho endaweni, phakamisa iingalo zakho ngqo ngamacala akho.
Misa ikhefu, emva koko ubuyele kancinci ekuqaleni.
Ukuxhathisa iBhendi yamaGxa
Bamba elinye icala kwaye ulizise kwinqanaba lesifuba sakho kunye neentende ezijonge phezulu.
Gcina ukuma ngokuthe tye kwaye ujonge kancinci.
Tyhala phezulu de kube iingqiniba zakho zitshixiwe ngaphandle, emva koko ubuyele kancinci kwindawo yokuqala.
Ukuchasana neBand Bicep Curls
Yima ngeenyawo zombini kwibhanti yokumelana ephethe izibambo ezinde ecaleni kwamacala akho ngeentende ezijonge phambili.
Kancinci usonge izandla ukuya emagxeni, ucinezela ii-biceps kwaye ugcine iingqiniba ecaleni kwamacala ethu.
Khulula kancinci iingalo umva ezantsi kwindawo yokuqala.
Imiqolo ethe tye neBand Resistance
Ukubamba izibambo zebhendi yokumelana, beka iziko lebhendi phantsi kweenyawo zakho
Tsala izibambo de zibe sezindlebeni zakho kwaye iingqiniba zingaphezulu kwentloko yakho. Khulula kancinci.